Imibuzo Evame Ukubuzwa-Nantong GAOYA STEEL ISAKHIWO CO., LTD.
Nantong GAOYA STEEL ISAKHIWO CO., LTD.Onguchwepheshe okuklama,esikhiqiza nokufaka izinhlobo izakhiwo,nezinye uchungechunge.
Ikhasi lasekhaya>Imibuzo Evame Ukubuzwa
Wena enza imboni noma inkampani zokuhweba?
Singabantu womshini ifektri. Wena wamukela ukuvakashela nathi nganoma yisiphi isikhathi. Esikhathini workshop,it has a ephelele eziphambili imishini uhlelo ngokwenza izakhiwo steel kanye panel. Ngakho singaqinisekisa izinga ezinhle futhi amanani abiza.
Kungani kufanele ukhethe wena?
Njengoba engena ezimakethe zomhlaba jikelele, siye babe ozakwethu kwabaningi ukuhweba angaphandle companies.Partner kusukela Israyeli wathi,"Sikhetha ukuba ungagcini nje ngenxa yentengo kanye izinga,kanti futhi kuwumthwalo wakho nobuqotho abafanelwe ukuba babe abangane bami ethembekile. "
Kunjani kokulawula kwakho izinga?
Okokuqala,imikhiqizo yethu baye badlula CE EN1090 futhi ISO9001:2008,okusho imikhiqizo yethu ziye ihlolwe party.And lwesithathu ngaphambi ngokubeka ekukhiqizweni,zonke izinto zokusetshenziswa kufanele ihlolwe ukuthi iyasebenza ku advance.During ukukhiqizwa,sinawo uchungechunge imibhalo ukucutshungulwa Inkomba, abasebenzi ezisetshenziswa ngezindinganiso futhi uqondiswa yi izinga ukulawula personnel.After ukukhiqizwa,esinalo onjiniyela ukuhlola ikhwalithi baqikelele lokhu.
Kanjani ukuze uthole wacaphuna wena?
Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi nge-imeyili, WhatsApp, Skype kanye nanoma iziphi ezinye izindlela,futhi asinike ulwazi oluyisisekelo,ezifana usayizi eqondile isakhiwo,usayizi izicabha namafasitela kanye nobungako,okokusebenza ofuna ukuyisebenzisa ngoba izindonga roof.After ukuthi,thina ingakunika amanani cishe ngo 30 minute.If odinga ukukwazi eminye imininingwane,ake uxoxe kabanzi.
Unganikela inkonzo design?
Yebo,sinesibonelo ithimba unjiniyela futhi kungaba ukuklama ngawe ngokuvumelana umdwebo wakho requirements.Architectural,isakhiwo idayagramu,ngokucubungula imininingwane umdwebo kanye ukufakwa umdwebo zizokwenziwa futhi ake uyaqinisekisa ngesikhathi ezahlukene yephrojekthi.
Isikhathi kwezidingo incike ubukhulu nobuningi bama building.Generally ngaphakathi 30 izinsuku ngemuva kokuthola payment.And mpahla ngokwengxenye kuvunyelwe-oda enkulu kakhulu.
Ingabe unikele inkonzo ukufakwa?
Yes.We futhi ube iqembu ukufakwa abroad.Firstly,ukufakwa imidwebo uzonikezwa phambi izimpahla bafike endaweni port.If udinga,thina nihlela onjiniyela ukwenza umyalelo kuphrojekthi site.For iphrojekthi enkulu nezimfuneko amakhasimende ',singahlinzeka project iqembu lonke.
Yini igama elithi yokukhokha?
30% idiphozi futhi 70% ibhalansi ingakafiki imithwalo.
Copyright © Nantong GAOYA STEEL ISAKHIWO CO., LTD.. Wonke Amalungelo Agodliwe.